कोरोनाले कृषिमा अवसर देखायो | eAdarsha.com
पोखरा । गण्डकी प्रदेशको पशु तथा मत्स्य निर्देशनालयले यहाँका सरोकारवालासँग छलफल र अन्तरक्रिया गरेको छ । कोभिडपछि पशुपालनको क्षेत्रमा देखिएका चुनौती र अवसरका बिषयमा छलफल गरिएको हो ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गण्डकी प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापाले कोरोनाले कृषि क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पारेको बताए । ‘कतिपय क्षेत्र डामाडोल छ । केही समस्या त कृषिमा पनि भयो,’ उनले भने, तर उत्साह र आकर्षण समेत थपिएको छ । बाँझा जमिनमा खेती हुन थाले ।’ उनले पशु र मत्स्यको व्यवसायिक पालन विस्तारमा सरकार क्रियाशील रहेको बताए ।
मन्त्रालयकी सचिव शवनम शिवाकोटीले किसानलाई विना झन्झट सहयोग गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिइन् । उनले व्यवसायिक कृषिका लागि सरकारले बढी ध्यान दिएको भन्दै त्यसको लाभ लिन आग्रह गरिन् । ‘धेरै कार्यक्रमहरु छन् । तर किसानसम्म त्यो कार्यक्रम पु¥याउन सरोकारवालाको भूमिका रहन्छ,’ उनले भनिन्, ‘बढी भन्दा बढी किसानलाई समेटेर कार्यक्रमको प्रतिफल पु¥याउनुपर्छ ।’
गण्डकीलाई मासु, अण्डा र माछामा आत्मनिर्भर बनाउन सरकार कम्मर कसेर लागेको उनीहरुको भनाई छ । सरोकारवालाहरुले भने माग र उत्पादनका आधारमा अनुदान र प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिए । निर्देशनलायका निर्देशक डा. मनबहादुर पुनको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सञ्चालन बरिष्ठ पशु चिकित्सक डा. प्रेरणा सेढाईं भट्टराईले गरेकी थिईन् ।